काका भतिजीको प्रतिष्पर्धामा कसले मार्ला बाजी ? – Satyapati
काका भतिजीको प्रतिष्पर्धामा कसले मार्ला बाजी ?
बंगलादेशमा आज आमनिर्वाचन
ढाका । दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेशको ३५० सदस्यीय संसदको चुनाव आज हुँदैछ । बंगलादेशमा विगत १० वर्षदेखि शेख हसिना वाजेद नेतृत्वको अवामी लिगको सरकार छ । विपक्षी दल बंगलादेश नेशनलिष्ट पार्टी सत्तामा आउनका लागि जोडतोडले प्रयास गरिरहेको छ ।
यद्यपि छिमेकी भारतका सञ्चारमाध्यमहरुले भने यसपालिको निर्वाचनमा पनि शेख हसिनाकै पल्ला भारी रहेको बताइरहेका छन् । हसिना अहिलेको भारतको संस्थापन पक्ष निकट मानिन्छिन् । उनले विदेश मामिलामा भारतलाई समर्थन गर्नुका साथै मुश्लिम कट्टरपन्थीमाथि कडा रुप अपनाइरहेकी छन् । जुन भारत पनि चाहन्छ ।
भारतले पनि आफ्नो छिमेकी देशमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको जनाइएको छ । विपक्षी दलकी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया भने भ्रष्टाचारको आरोपमा अहिले जेलमा रहेकी छन् र उनलाई चुनाव लड्न अहिले प्रतिबन्ध रहेको छ । त्यसैले अहिले विपक्षी दलको तर्फबाट चुनावको कमाण्डरको रुपमा कमाल हुसैन रहेका छन् ।
कमाल अहिलेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाका बाबु शेख मुजिबुर रहमानकै सहयोगकीका रुपमा एकताका काम गरेका व्यक्ति हुन् । उनी बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि सन् १९७१ देखि १९७५ सम्म बंगलादेशको पहिलो कानुन मन्त्री भएका थिए । उनकै अध्यक्षतामा गठित समितिले बंगलादेशको संविधानको मस्यौदा गरेको हो ।
पछि हसिनाको पार्टीमा तालमेल नमिलेपछि १९९०को दशकमा उनले गानो फोरम नामको राजनीतिक पार्टी गठन गरेका हुन् । हसिनाको दशवर्षे शासनबाट देश वाक्क भएकोले परिवर्तनका लागि भन्दै उनले अहिले विपक्षी पार्टीसँग चुनावी कार्यगत एकता गरेका छन् । विपक्षीले चुनाव जितेको अवस्थामा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने बारेमा भने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।
अक्सफोर्डमा पढेका र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कमाललाई प्रधानमन्त्री हसिनाले ‘काका’ भन्ने गरेकी छन् । ८२ वर्षीय कमाल चर्चित वकिल पनि हुन् । अहिले विपक्षीहरुले प्रतिबन्ध लगाइएको दल जमात ए इश्लामीसँग पनि कार्यगत एकता गरेको भन्दै सरकारी पक्षबाट कडा आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले हत्यारासँग कार्यगत एकता गरेको विपक्षीलाई आरोप लगाएकी छन् ।
विपक्षमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने प्रष्ट नभएपनि कमालले आफू निकटस्थहरुसँग भने आफैं बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहर भने गरेका छन् । लौरो टेकेर हिंड्ने कमालले आफू निकटस्थहरुको भेटमा मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको उदाहरण दिने गरेको बताइन्छ । जो ९२ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको रापोर्टरका रुपमा समेत काम गरिसकेका कमालको पक्षमा पश्चिमा शक्तिहरुको भने साथ रहेको पाइन्छ । आज हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा गर्न देशैभरी सरकारले ६ लाख सुरक्षाकर्मी खटाएको जनाएको छ । मतदानको दिन नजिकिँदै गर्दा हिंसात्मक घटनाहरु पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् ।
आमनिर्वाचनका लागि देशभर झण्डै ४० हजार मतदान केन्द्रहरु तय गरिएको जनाइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुलाई विभिन्न समूह तथा तहका विभाजन गरेर मतदान केन्द्रदेखि गाँउ गाउँसम्म खटाइएको निर्वाचन आयोगका अधिकारी राफिक्वाल इस्लामले बताएका छन् । यस पटकको निर्वाचनको सिलसिलामा अहिलेसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौ घाइते भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो जित सुनिश्चत भएको दाबी गर्दै आएकी छन् भने विपक्षीहरुले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री हसिनाले विपक्षीहरुले आफूविरुद्ध बम आक्रमण गराएको आरोप लगाएकी छन् । उनीमाथि विपक्षी दलले राज्य आतंक मच्चाएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी दलकी प्रमुख खालिदा जिया हाल ढाकास्थित जेलमा छन् ।
७३ वर्षीया उनी पूर्वसैनिक तानाशाहकी विधवा हुन् भने प्रधानमन्त्री हसिनाका बाबु बंगलादेशका संस्थापक नेता हुन् । अनि अहिलेका विपक्षी कमाण्डर कुनै बेला बंगलादेशका उनै संस्थापकका सहयोगी हुन् । हसिना र जिया दुबै महिला नेतृ सन् १९८० को दशकदेखि नै पारिवारिक विरासतका आधारमा राजनीतिक रुपमा सक्रिय भएका हुन् ।
यो चुनावमा विजयी भए शेख हसिनाले बंगलादेशमा सबैभन्दा लामो अवधिसम्म सत्तासिन हुने रेकर्ड बनाउने छन् । यसअघि दुबै महिला नेतृले जनआन्दोनको आडमा सन् १९९० मा सैनिक तानाशाह हुसेन मोहम्मद एर्सादलाई सत्ताच्यूत गरी लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गरेका थिए । तर सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्रीमा जिया निर्वा्चित भएपछि यी दुई महिला नेतृबीच चरम कटुता उत्पन्न हुन गयो ।
त्यसपछिका चुनावबाट यी दुई लगभग आलोपालो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् । प्रतिशोधको राजनीति चरमविन्दुमा रहेको छ । विपक्षी दलकी अध्यक्ष जिया भ्रष्टाचारको आरोपमा १७ वर्षको जेलमा छन् । विपक्षी दलले उनीमाथिको आरोप राजनीति प्रेरित भन्दै आएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीसम्बद्ध हजारौं कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको बीएनपीले जनाएको छ ।
चर्को विवाद, तनाब र हिंसाका बीच बंगलादेशमा गत बिहीबार रातीदेखि मौन अवधी सुरु भएको थियो । बंगलादेशमा आज हुन लागेको आमनिर्वाचनप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो व्यक्त गरेको छ । निर्वाचनको हाल जारी अभियानका क्रममा भएका आन्दोलन तथा हिंसात्मक क्रियाकलापका कारण निर्वाचनको दिनमा पनि हिंसा बढ्नसक्ने आशंका संयुक्त राष्ट्र संघले व्यक्त गरेको छ ।
निर्वाचनलाई लिएर भएको आन्दोलनमा १ सय भन्दा बढी अधिकारकर्मीहरु अहिले पक्राउ परेका छन् । विपक्षीमाथि धरपकड गरिएको उनीहरुको आरोप रहेको छ । अमेरिकाले पनि बंगलादेशमा बढेको हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बंगलादेशको लागि अमेरिकी राजदूत एरल मिलरले चुनावी अभियानका क्रममा हुने हिंसा विपक्षी पार्टीप्रति नै लक्षित हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गएको दुई हप्तादेखि बंगलादेशमा जारी हिंसाबाट विपक्षीहरूलाई तारो बनाइएको पाइएको छ । सोही कारण नै अमेरिकाले यो चासो व्यक्त गरेको समाचारमा जनाइएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा जारी हिंसामा अल्पसंख्यक र महिला उम्मेदवारसमेत पीडित भएको मिलरद्वारा जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ । उता जेलमा रहेकी विपक्षी नेत्री खालेदा जियाले वर्तमान सरकारले गराउन लागेको आमनिर्वाचन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न होला भन्नेमा आफ्नो विश्वास नरहेको टिप्पणी गरेकी छन् । (एजेन्सीहरुको सहयोगमा)